आधुनिक युगको विवेक शून्य सभ्यता ! |
आधुनिक युगको विवेक शून्य सभ्यता !
प्रकाशित मिति :2016-01-23 10:00:07
मुक्ता सिंह (मुक्कु)
आहाँ ! ! ! कति राम्री दुलही हेर्नुस त दिदी फुच्चुले निक्कै रमाईलो पाराले भनि । मैले नी अच्चम मान्दै स्कुटी रोकेरै खै कता, भन्दै हेरें । नभन्दै साह्रै सुन्दर दुलही थिइन् उनी । धनगढीको एल.एन.चोक नजिकको बुटिक अगाडी । पुसको महिना बिदाको दिन अनि फुर्सदको समय । समय मिल्ना साथ स्कुटी हुर्इंकाई हाल्नुपर्ने हाम्रो बानी, त्यो दिन त्यस्तै थियो । त्यही घुम्ने बेला झकमक्क सिंगारिएकी साह्रै सुन्दर दुलही देख्यौं हामीले ।
हुन त दुलही पहिले कति देख्यौं देख्यौं, आफन्तकोमा, छिमेकीकोमा, कति हो कति ! झन सानोमा त गाउँका दिदी दुलही हुँदा मैले पनि मम्मीलाई खुब सताएछु, म पनि दिदी जस्तै बन्छु भनेर ।
आजकाल मम्मीले उबेला यस्तो भन्थ्यौ, अहिले नाईनास्ती गर्ने ? भनेर जिस्काउँदा, लाज लागेर आउँछ । तर, त्यो दिन दिदीलाई नभएर डमी कुमारीलाई देखेका थियौं । झकमक्क सजिएकी , खुब सिंगारिएकी, रातो टल्किने घुम्टी ओढेकी, एक तमासले लाजै नमानी हेरिरहेकी ,पुसको कठ्याङग्रिने जाडोले पनि उनलाई कत्ति असर गर्न नसकेको ।
उनलाई हेरी सकेपछि स्कुटी घुईक्याएँ फुच्चुको घरतिर । हाम्रो ‘गसीपको टपीक’ बनिन् उनै डमी कुमारी । फुच्चुले फेरी भनि कति राम्री देखिएकी दुलही (डमी कुमारी) है अनि कति भारी (राम्रो अनि महङ्गो) सारी लगाएकी । कस्तो राम्रो है दिदी उस्ले प्रश्नात्मक शैलीमा सुनाउँदै गई, अनि मैले पनि उसको कुरामा सही थाप्दै गएँ । उनले लगाएको भारी ब्लाउज, हातभरी रङगीचङगी भारी चुरा अनि त्यो घाँटीमा कति ठुलो भारी माला उनलाई कति भारी भएको होला । मैले पालैपालो यसरी भनिरहँदा फुच्चु निक्कै जोर जोरले हाँस्न थाली । कुरा गर्दा गर्दै फुच्चुको घर आएछ । उसले दिदी पनि कस्तो मजाक गर्नुहुन्छ डमीलाई पनि कहीँ भारी हुन्छ त भन्दै आफ्नो घरतिर गई । मपनि आफ्नो घरतिर मोडिएँ । फुच्चुलाई त हसाएँ उ हाँसी पनि । तर, म मजाकको मुडमा थिईनँ । न त मलाई त्यो दिन हाँसो नै लागेको थियो, न हसाउँन मन नै । जैले हाँसो लाग्ने कुरा अरुलाई सुनाउनु भन्दा अगाडी म आफैँलाई थामी नसक्नुको हाँसो लागेर आउथ्यो, तर त्यो दिन पटक्कै हाँसो लागेन । झन मन भारी भएर आयो । के के सोचें सोचें । आँखा भरिए, तर छचल्किन दिइनँ ।
घर पुगेको थाहै भएन । घर पुगिसकेपछि पनि एकोहोरीरहन मन लाग्यो । फेरि सोच्न थालेँ, डमीलाई पनि कहीँ भारी हुन्छ त ? फुच्चुको प्रश्न अनि उस्को एकलहरको हाँसो, मलाई खुब उडाई उस्ले । मेरो स्मृतीको रिल रोकियो । डमी कुमारी जस्तै सज्जिन खोज्ने ती प्राकृतिक रुपमै सौन्दर्यले भरिपूर्ण कुमारीलाई त्यस्तै साडी, माला, हातभरी चुरा कति भारी हुँदो हो ? अनि सबैभन्दा भारी त ती किन्न बाबुआमाले लिएको ऋण झन कति भारी हुँदो हो ? तिनै भारी सामानको थुप्रो सुधारिएको शब्द दाईजो, जस्ले हाम्रो समाजमा जरो गाडेको छ । संस्कारी अनि ज्ञानी नानी बनाउन आफ्नो सारा जिवन खर्चेका ति आमाबुवाले आफूले ऋणको भारी बोकेर छोरीलाई खुशीखुशी भारी सामान दिए । फुच्चु तिम्ले नि बुझ्यौ, हाम्रा बाआमाले पनि बुझेका छन्, तर हामी ती डमी कुमारी जस्तै भएका छौं, विवेक शुन्य ।।। हामी आधुनिक युगका सभ्य कुमारी भनिनेहरूमा र ती भारी पोशाक र गहनामा सज्जिएर राखिएका डमी कुमारीहरूमा के फरक फुच्चु ?????
प्रकाशित मिति: २०७२ माघ ९ गते शनिवार